८ लाख घुस काण्डमा मुछिएका गाउँपालिका अध्यक्षबारे अख्तियारले किन गरेन ६ महिनासम्म निर्णय? :: रोहित महतो :: Setopati
८ लाख घुस काण्डमा मुछिएका गाउँपालिका अध्यक्षबारे अख्तियारले किन गरेन ६ महिनासम्म निर्णय?
धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर राउतलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ महिनाअघि घुस बापत ८ लाख रूपैयाँ लिएको आरोपमा अनुसन्धान थालेको थियो।
अख्तियारका अनुसार अध्यक्ष राउतले गाउँपालिका कार्यालयको भवन निर्माण बापतको रकम भुक्तानी गर्न गएका ठेकेदारबाट गत फागुन १७ गते सो घुस रकम लिएका थिए।
तर अहिलेसम्म उनीविरूद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउने वा नलगाउने भन्नेबारे अख्तियारले निर्णय गरेको छैन।
अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले यो मुद्दामा छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी दिए।
उनका अनुसार स्टिङ अपरेसनसम्बन्धी नियमावली बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि घुससहित समातिएका राउतलाई मुद्दा चलाउन ढिलाइ भएको हो।
सेवाग्राहीसँग कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले मागेको घुस रकम आफैंले दिएर पठाउने, पछ्याउने र लिएपछि पक्राउ गर्ने अख्तियारको स्टिङ अपरेसन स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी संविधानको प्रावधान र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्चले गत वैशाखमा बदर गरिदिएको थियो।
यो आदेशपछि राउतविरूद्धका प्रमाण जुटाउन अख्तियारलाई यत्रो समय लागेको देखिन्छ।
‘स्टिङ अपरेसन बदर गर्ने सर्वोच्चको आदेशपछि हामीले अदालतमा कसरी प्रमाण जुटाएर पेस गर्ने र गरेको कारबाहीलाई नतिजामुखी बनाउन छानबिनलाई व्यहारिक बनाउनेतिर हाम्रो अनुसन्धान केन्द्रित छ,’ भण्डारीले भने, ‘यो मुद्दामा छिट्टै हामी निष्कर्षमा पुग्नेछौं।’
गाउँपालिकाको प्रदेश २–००२–००१ झ ०००२ नम्बरको गाडीमा सवार भई बटेश्वरतिर फर्किने क्रममा अख्तियारले पछ्याएपछि क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–५ स्थित झाडीमा घुस रकम फालेर अधयक्ष राउत फरार भएका थिए।
गाडी चालक वीर बहादुर मगरलाई भने अख्तियारले नियन्त्रणमा लिन सफल भएको थियो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयका अनुसार फरार भएका राउत गएको जेठ महिनामा आफैं सम्पर्कमा आएका थिए।
त्यो मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेकाले उनलाई तत्काल धरौटीमा छाडिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले बताए।
'अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान अधिकृतले चाहेको बेलामा खबर गर्ने बित्तिकै आयोगमा उपस्थित गर्ने शर्तमा उनलाई धरौटीमा छोडिएको हो,'उनले भने।
यद्यपि कति धरौटी रकम लिएर छोडिएकोबारे भण्डारीले खुलाउन चाहेनन्।
अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता नगरेको र धरौटी रकम बुझाएकाले उनी पहिलेजस्तै नियमित रूपमा काममा फर्केको सहायक प्रवक्ता भण्डारीले बताए।
राजनीतिक दबाब र शक्तिको आडमा अख्तियारले अध्यक्ष राउतलाई उम्किने छुट दिएको स्थानीयले आरोप लगाउँदै आएका छन्।
घुस रकम फालेर अध्यक्ष राउत फरार भएको भन्दै त्यतिखेर स्थानीयले अख्तियारविरूद्ध नै नाराबाजी गर्दै करिब एक सातासम्म प्रदर्शन गरेका थिए।
‘पावर र राजनीतिक दबाब अगाडि अख्तियार लाचार भएको छ। के सामान्य मान्छेले यति ठूलो घुस लिएका भए छोड्थ्यो त?,’ आक्रोश पोख्दै स्थानीय राममणि कुश्वाहाले भने, ‘अख्तियारले जसलाई पनि घुस खान छुट छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ।’
अध्यक्ष राउतले पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहको कोटाबाट टिकट पाएका थिए। तर घुस काण्डमा मुछिएपछि तत्कालीन नेकपाको केपी शर्मा ओली समूहमा लागेका थिए।
उनी एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री रघुवीर महासेठनिकट मानिन्थे।
फरार भएपश्चात अध्यक्ष राउत गएको जेठ अन्तिम साता तत्कालीन उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री महासेठसँगै काठमाडौंबाट गाउँ फर्केका थिए।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २१, २०७८, ०९:३९:००